Wararka - Tababar ku saabsan Xirfadaha Xirfadaha iyo Shahaadada Shahaadada Soo dhawaynta iyo Hawl-wadeennada Sare
Nidaamka alxanka wuxuu u baahan yahay shaqaalaha inay ku soo biiraan qaybaha birta iyagoo dhalaalaya qaybo bir ah isla markaana isku duubay. Sida laga soo xigtay Xafiiska tirakoobka ee Shaqaalaha, walidiinta waxay leeyihiin fursado shaqo oo wanaagsan, in kasta oo aysan jiri doonin koritaan deg deg ah oo ka jira meeshan. Waa inaad heshaa tababar kahor intaadan ushaqeyn welin. Tababar ayaa laga heli karaa kuliyadaha bulshada, iskuulada farsamada iyo dugsiyada sare. U diyaargarowga inuu u shaqeeyo sidii alxanle wuxuu qaadanayaa ugu yaraan lix toddobaad。
Akhriska qoraalka 'Blueprint reading' waa koorso gacan qabasho ah oo u oggolaaneysa ardayda inay bartaan oo ay fasiraan astaamaha alxanka iyo sawirrada isku imaatinka ee lagu soo daray inta badan naqshadaha loo isticmaalo deegannada warshadaha. Barashada akhrinta naqshadaha, alxanleyaashu waxay awoodaan inay aqoonsadaan balaca, dhererka iyo cabirka dhererka mashruuca, tarjuma alxanka iyo astaamo kale iyo walxaha sawir gacmeed oo si sax ah u tilmaamaya faahfaahinta.
Welwelku waa inuu ku qanacsan yahay joomatari iyo jajab. Waa inay sidoo kale ogaadaan sida loo xisaabiyo qaaciidooyinka fudud iyo cabbiraad sax ah. Xirfadahani waa lama huraan maxaa yeelay walidiintu waa inay noqdaan kuwo sax ah si looga fogaado khaladaadka qaaliga ah. Welders waxay si isdaba joog ah u isticmaalaan isla qaaciidooyin xisaabeed, taas oo u sahlaysa walxaha cusub inay si dhakhso leh ula qabsadaan.
Chemistry iyo Fiisigis
Alxamidu waa xirfad mabaadi'da aasaasiga ah ee injineernimada lagu dabaqo, markaa waa inaad ogaataa aasaaska kiimikada iyo fiisigiska. Kimistariga iyo fiisigisuba waa cilmiga lagu barto tamarta iyo maadada iyo saameynta ay ku yeeshaan is dhexgalka. Alxanka waa ku biirista labada birood wada kululeynaya, markaa waxaa jira falgal kiimikaad iyo mid jireed. Markaad barato kimistariga aasaasiga ah iyo fiisigiska, waxaad kuheleysaa faham ballaaran oo ku saabsan waxa dhacaya marka biraha kululaadaan oo ay isku xirmaan.
Alxamaynta waxay ku lug leedahay diyaarinta biraha, ka hubinta miridhku, iyadoo la adeegsanayo qalabka badbaadada ee saxda ah iyo isku dhalaalida qaybaha birta ah. Welderku waa inay ogaadaan farqiga u dhexeeya alxanka wanaagsan iyo midka xun. Waa inay ogaadaan sida ugu dhow ee loo dhageysto biraha inta lagu jiro howsha alxanka maaddaama tani ay tahay sida ay ku ogaan doonaan haddii biraha ay si sax ah u alxamayaan. Welderku waa inay sidoo kale ogaadaan sida ugu fiirsashada qalabka alxanka. Tani waa hab kale oo lagu cabiro sida hawsha alxanka u socoto.